Puntland iyo DFS oo ka wada hadlay wanaa jinta xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe – Radio Daljir
Puntland iyo DFS oo ka wada hadlay wanaa jinta xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe
Janaayo 18, 2019 8:12 b 0
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Baydhabo waxa uu kula kumay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo kamid ahaa waftigii ka qayb galay caleemo saarkii madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Farmaajo iyo Karaash ayaa ka wadahadlay sidii loo hagaa jin lahaa xiriirka dowladda federalka iyo Maamulka Puntland oo mudoo yinkii udambeeyay aan wanaagsanayn .
Dowladda Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujisay haladlkii ka soo yeeray madaxweyne Siciid C/lhaahi Deni ee ahaa in uu raacayo Dastuurka Puntland iyo waxa uu ka qabo xiriirka dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland .
Tan iyo intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Puntland C/wali Cali Gaas ,waxaa aad uxumaa xiriirka dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ,waxayna maamul goboleedyadu ay dowladda ku dhaliilayeen in ay baal martay Dastuurkii dalka ayna xaqirtay xuquuqdii maamul goboleeedyada .
Caleema saarkii madaxweynaha Koonfur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ayaa waxaan ka qayb galin Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo Jubbaland Axmed Madoobe .
Al-shabaab oo Caruur ka Afduubatay degmada Ceel-Garas ee gobolka Bokool (dhegayso)